मैदानमै किन रोए नेइमार ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
मंगलबार, असोज ६, २०७७
मैदानमै किन रोए नेइमार ?
२०७७ भदौ ८
धरानः बार्सिलोना लगातार दोस्रो सिजन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमफाइलनमा स्थान बनाउन असफल रहेपछि खेलाडी समेत निराश बने ।
घरेलु मैदान क्याम्प नाउमा भएको खेल सकिए लगतै नेइमार मैदानबाट बाहिरिने क्रममा रुँदै बाहिरएका हुन् । नेइमार युभेन्टसका ब्राजिलियन खेलाडी डानी एल्भेसको काँधमा टाउको राखेर रोए । एल्भेस गएको सिजन बार्सिलोनाबाट युभेन्टस गएका हुन् ।
लिग अन्तर्गत बुधबार राति भएको क्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा युभेन्टससँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको बार्सिलोना समग्रमा ३–० को हारसहित प्रतियोगिताबाट बाहिरियो । घरेलु मैदानमा भएका खेलमा बार्सिलोनाले ३५ पटक पोस्ट प्रहार गरेपनि गोल भने गर्न सकेन ।
लियोनल मेस्सी, लुइस स्वारेज तथा नेइमारले गोल गर्ने प्रयास गरे । तर उनीहरुको प्रहार गोलमा परिणत भने हुन सकेन । प्रिक्वाटरफाइनलको दोस्रो लेगमा ऐतिहासिक पुनरागमन गर्ने क्रममा नेइमाले दुई गोल गरेका थिए । तर क्वाटरफाइनलमा उनले गोल गर्न सकेनन् । अघिल्लो चरण पुग्न नसकेपछि नेइमारले आँसु रोक्न सकेनन् । ब्राजिलका नेइमारको नाम विश्वकपपछि फेरियो, आलोचकले उनको नाम राखिदिए–रुन्चे बालक । त्यो गिज्याइएको नामले अझै उनलाई छोडेको छैन । विश्वकपमा सामान्य ट्याकलमा पनि मैदानमा लडेको र रोएको भन्दै उनको आलोचना भयो । अलिहे उनी विश्वकपको पीडा भुलेर फ्रेन्च लिग वानमा रहे त्यहाँ पनि उनी रोए । केही सम्हालिएका २७ वर्षका नेइमारले पछि ट्वीट गरेर जित जस्तै हार पनि खेलको एक हिस्सा भएको र आफूहरुले सक्दो प्रयास गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामी अन्तिमसँग लडिरह्यौँ । तपाईँहरु सबैलाई साथ र सहयोगका लागि धन्यबाद ।’
नेइमारले दुई खेल खेल्न नपाउने
१० खेलाडी जसले कमाए सर्वाधिक
मेस्सीले यसकारण बार्सिलोना छाड्दैनन् !
मेस्सी र रोनाल्डोको भीडन्तः अन्ततः को अगाडि ? को हो सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडी ?
आज हुने फ्रेन्च फुटबलको उपाधि हुत्याउँछौंः एम्बाप्पे
मेस्सी अनुबन्ध गर्न जति तिर्न पनि तयार
धरानमा स्कुल चलाउनेबारे झ्याप्प निर्णय नहुने !
धरानको विष्णु स्कुलको क्लबद्वारा शान्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजना
बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट
धनकुटाको लेउती खोलाले वृद्धलाई बगाउँदा मृत्यु
सुनसरीकी किशोरीलाई १२ लाखमा डिल !
एउटा बेन्चमा दुईजना राखेर सरकारी स्कुलमा पठनपाठन थालियो
धरानमा स्कुल खोल्नेबारे उपमहानगरपालिकाको ‘मोडालिटी’
धरान आउँदै गरेको सवारी भेडेटार छेऊ ९ किलोमिटरमा दुर्घटना
‘छलफल र संवाद छैन’
नियात्राः बैंकक वेश्यालयमा बितेका रातहरू !
६ महिनापछि यसरी उड्यो नेपालमा हवाइजहाज
धरानमा ३५ वर्षीय संक्रमित पुरुषको मृत्यु